Shirka Golaha Wasiirada maanta oo baaqanaya - Jowhar Somali news Leader
Home News Shirka Golaha Wasiirada maanta oo baaqanaya
Shirka Golaha Wasiirada maanta oo baaqanaya
Shirka Golaha Wasiirada oo maalin walba oo Khamiis ah la qabto ayaa maanta baaqanaya iyadoo farriimo loo diray wasiirada, laguna wargeliyay inuu baaqday.
Baaqashada kulankan ayaan si rasmi ah loo shaacin hase yeeshee hadal heyno kala duwan ayaa soo baxayay saacadihii u dambeeyay oo ku saabsanaa xaalada maanta ee shirka Golaha Wasiirada iyo waxa ka soo bixi kara.
Tan iyo wixii ka dambeeyay maalintii Sabtidii markii lagu buuqay Madaxweynaha oo ka hor khudbeynayay Baarlamaanka xaalada siyaasadeed ee dalka ayaa marba marxalado cusub ku soo kordhayay iyo tallaabooyin is xig xigay, kaddib baaqii ka soo baxay
Guddoomiyaha Aqalka Sare oo dalka geliyay muuqaal cusub oo kala guur siyaasadeed in la guda galay muujinayay.
Inkastoo shirka golaha wasiirada lagu galo aalada zoomka ayaa hadana waxaa jira in dhowaan Ra’iisul Wasaare Kheyre uu ku amray golaha wasiirada inay guda galaan sidii dalka loogu diyaarin lahaa doorasho.
Akhriso Shaxda Deegaan Doorashada iyo TIrada Kuraasta ee loo asteeyay
Guddoomiyaha gobolka Banaadir iyo Guddoomiyaasha Golaha Shacabka iyo Aqalka Sare oo kulmay
Duqa Muqdisho oo dhagax dhigey xarumo laga hirgelinayo degmada Dharkeynley